Sitsalele: + 86-15176918352
I-Mineral Fibre Ceiling Board
Ifayile yeglasi yeCliling Ceiling
I-Rock Wool Insulation
Ukufakwa kweglasi yoGlasi
Uncedo lweGridi yokuDaya
ngu admin nge-20-07-14
Inkqubo emiselweyo Luhlobo olutsha lwezinto zokwakha. Ngokuphuhliswa kolwakhiwo lwanamhlanje lwase China, isetyenziswe ngokubanzi kwiihotele, kwizakhiwo zesitalato, kwizikhululo zabahambi, kwizikhululo zeqonga, kwiindawo zemidlalo, kwiivenkile ezinkulu, kwizakhiwo zeofisi, kwizakhiwo ezindala zokuvuselela izakhiwo, ...
Intshayelelo yeglasi yeFibre
ngu admin nge-20-07-13
Uboya beglasi luhlobo lwefungi yokufakelwa. Isebenzisa isanti ye-quartz, i-limestone, i-dolomite kunye nezinye i ores zendalo njengezinto eziphambili zokupheka, zidityaniswe nesoda eshisayo, i-borax kunye nezinye izixhobo zekhemikhali zokunyibilikisa kwiglasi. Kwimeko enyibilikisiweyo, iphoswa kwiifayile ze-flocculent ezilungileyo ngeendlela o ...
Wazi ntoni nge-Mineral Fiber Board?
Ibhodi yoboya yamaminerali iya kufakwa kwiipatheni ezahlukeneyo ngexesha lokuvelisa, ezilungele ukusetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo. Umphezulu oqhelekileyo webhodi yoboya bamaminerali unemingxunya yemingxunya, imingxunya emikhulu kunye emincinci, iipinileles ezixineneyo, ukugqabhuka kwesanti kunye nonyango lwefilimu. Sinokwenza ...
Imveliso engama-2020 iphinde yaqaliswa
ngu admin nge-20-06-01
Ukuveliswa kwemveliso ka-2020 kwaqala kwakhona ngokweemfuno ze-Jinzhou COVID-19 Ukuthintelwa kwe-Epid isifo kunye neQela lokuLawula, inkampani yethu ihlangabezana neemeko zokuqalisa komsebenzi kunye nemveliso, kuvunyelwe ukuqala imveliso ngoFebruwari 18. Ngexesha lemveliso ...
Ndijonge ukusebenzisana nani!ukubuza
indawo yemveliso tangqiaotang zhang jiagang isixeko china